Ny toe-panahy ho entin’ny tanora miatrika izao fiainana izao
Mpitoriteny 11 : 9-10 :
“ Mifalia, ry zatovo, dieny mbola tanora hianao; ary aoka ny fonao hampifalifaly anao amin’ ny andro fahatanoranao; ka mandehana any amin’ izay sitraky ny fonao sy izay jeren’ ny masonao; nefa aoka ho fantatrao fa ho entin’ Andriamanitra hotsaraina hianao amin’ izany rehetra izany.Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy; fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. ”
Asan’ny apostoly 1 : 8 :
“ Fa hahazo hery hianareo amin’ ny hilatsahan’ ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’ i Jodia sy Samaria ary hatramin’ ny faran’ ny tany.”
Raha hitady fiainana dia tsy misy afa-tsy Jesosy. Aza miandry mifanena amin-java-tsarotra, fa amin’izao fahatanorana sy ny herinao izao no itadiavo an’I Jesosy.
Ny fahatanorana no dingana izay anomanana ny fiainana, ahafantaranao ny antom-pisianao eto ambonin’ny tany, ahatsiarovanao ny hatsarana izany fahavelomana ety an-tany, ahazoanao mivelatra ara-tsaina sy ara-batana. Izany no dingana ametrahana safidy ny hanomanana ny ho avy rehetra.
Ireo dingana :
1. Manomana ny fiainana mandrakizay : ety ambonin’ny tany no anomananao ny mandrakizainao : mila mitandrina satria mandalo izao fiainana izao sy ny filany, mandalo ny fahatanorana ka tian’Andriamanitra isika manana antoka ny fiainana mandrakizay ;
2. Manomana ny fiainan-ko avy eto ambonin’ny tany, izany hoe ny asa aman-draharaha : ahoana no ananako antoka mba ahafahako mivelona sy miaina eto ambonin’ny tany ? Hanana saha hiasana (tahaka ny adama sy eva) : 2 tesaloniana 3 : 10 : “ Fa fony mbola teo aminareo ihany aza izahay, dia nandidy anareo hoe: Raha misy tsy mety miasa, dia aoka tsy hihinana izy. ”
3. Manomana ny ankohonana : Mametraka ny ho avy rehetra eo amin’Andriamanitra. Izy no manolotra vady fa tsy ianao no mitady. Apetrany ao am-ponao ilay Agape : fitiavan’Andriamanitra ; Manana ny fotoany Izy.
Raha manaraka ireo dingana ireo dia ho tonga ao aminao ny Fanahy Masin’Andriamanitra hanome fahononan-tena (maîtrise de soi) araka ny voasoratra ao amin’ny Galatiana 5 :22 ahafahana mifehy ny fiainana sy fitondra-tena.
Mila tehirizina ny fahasoavan’Andriamanitra (satria ny fahatanoranao dia miaraka amin’ny fahatsaran-tarehy, ny tokatrano, ny asa aman-draharaha), mazotoa mihaino ny tenin’Andriamanitra.
Mila ny tanora na ny lehibe Andriamanitra ho vavolombelona.
Rehefa manolon-tena ianao dia aza manao kitoatoa. Aza misangy amin’ny devoly fa mila miambina isan’andro.
Ny toe-panahy tadiavin’Andriamanitra dia ny fananana antoka ny amin’ ilay fiainana mandrakizay. Ny ilain’ny Tompo amintsika dia ny ho vavolombelony, hanaporofo fa mbola manova olona Andriamanitra, mbola manafaka eto amin’ity izao tontolo izao ity. Asehoy fa azo atao ny miaina amim-pahamasinana amin’ny fahatanorana.
Tsy vita anefa izany raha tsy manaraka ny fanolokoloana ny tenin’Andriamanitra amin’ny fiangonana, fikambanana, sns…